Ịnụ Ụtọ A ikpe ọmụma-Free Njem: mbikọ Ulo | Save A Train
Home > Travel Europe > Ịnụ Ụtọ A ikpe ọmụma-Free Njem: mbikọ Ulo
site Karina Santos
Gọọmenti rụrụ nwere a ọjọọ RAP n'ihi ịbụ unyi, inyoghi inyoghi, na stinky. Ma ị maara na gọọmenti rụrụ ugbu a kwalite? N'ihi na ndị na-amaghị ihe na gọọmenti rụrụ na-, ọ bụghị naanị na anyị sụgharịrị họtel ahụ ma soro ya gbaa ọsọ. Gọọmenti rụrụ dị ọnụ ala ụlọ ga-enyere gị gbatịa njem gị mmefu ego.
Ma unu bụ ndị a solo njem ma ọ bụ na-ejegharị ejegharị na gị na ezinụlọ gị ma ọ bụ ịrịba ama ndị ọzọ, gọọmenti rụrụ nwere ulo ụdị dị nnọọ ka ị. Gọọmenti rụrụ na-emekarị ekerewo òkè ụlọ. A na-akọrọ ime ụlọ nwere ike 8 ka 10 ndị mmadụ niile bunking ọnụ. Ụfọdụ nwere ụlọ na ike nwere 3 ma ọ bụ 4 ndị mmadụ na-ekere òkè a ụlọ. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na gị onwe gị ohere, ọtụtụ ebe na-enye onwe ụlọ ma ọ bụ ezinụlọ ụlọ, ma ọ bụrụ na ị na- ejegharị ejegharị na ndị ezinụlọ.
Gịnị na-atụ anya
Gọọmenti rụrụ pụrụ ịbụ ndị frills na hotels enye. N'ihi ya, e nwere ike inwe dịghị kọfị igwe n'ime gị ụlọ, ọ dịghị free ncha, ma ọ bụ friji gị. Ị ga-ọbụna na-na-free akwa nhicha. Ma ụfọdụ gọọmenti rụrụ n'ezie ere ncha na ndị ọzọ dị mkpa na a ọnụ ala price. na n'aka, eleghị anya ị ga-enweghị gị onwe gị dresser ma ọ bụ kaboodu na-akọrọ ụlọ, ma ha na-eme nwere igbe ebe i nwere ike na-echekwa gị ihe. Ị nwere ike ime ka gị onwe gị na gbachiekwa ezie. Ọ bụrụ na gị na akpa bụ oke ibu na mgbe ọpụpụ, ị ka chọrọ na-eme ụfọdụ ikpeazụ-nkeji nlegharị anya, ị nwere ike ịhapụ gị akpa na ibu ụlọ ahịa.
Wezụga inwe ebe dị ọcha ịrahụ ụra na a mkpuchi nchekwa iji chekwaa ihe gị, ụfọdụ n'ime ndị a na ebe-enye ndị ọzọ eji enyere ndụ aka dị ka nke ọma. N'ebe ụfọdụ ga-enwe ihe dị ka ọdọ mmiri ohere, free nri ụtụtụ, free kọfị, obodo-eme. Ụfọdụ ọbụna nwere saunas na ịhịa aka n'ahụ mmiri na ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Na na na, n'aka, eleghị anya ị ga-esi otu nzuzo ị ga na a hotel. E nwere anyị na ebe dị ka ime ụlọ ịwụ, esi, ezumike ebe, na ebe ọrụ. Otú ọ dị, nke a bụ ezi ụzọ izute ndị. Ọ bụrụ na ị kpọgidere ke anyị na ebe ị pụrụ izute ndị njem si n'ụwa nile. Na ọbụna na-amalite uru enyi gị na ndị ị na-ezute gị njem na nwere ọhụrụ n'ọdịnihu njem buddies, oke! Ndị mmadụ na-na-arụ ọrụ na gọọmenti rụrụ na-na-na na na awuasara ndị mmadụ, n'ihi ya, ọ dị mma ka mingle na-emekọ na ha, dị ka nke ọma.
Ebe-ahụ na ha
Hostfọdụ gọọmenti rụrụ na-na obodo ma ọ bụ na ebe ndị ị ma ga-na-adịghị ọbụna na-achọpụta. Freehand Miami, a mbikọ na Florida, bụ nanị abụọ blocks n'ebe osimiri ma na-enye free kọfị nwere akpụrụ mmiri ka ya ọbịa. Na a Swiss spa mbikọ malitere site a nonprofit akpọ Hostelling International nwere ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ na anya nke Swiss Alps.
Olee otú Ọtụtụ ha na-emekarị Efu
Ọ bụrụ na ị na-a mmefu ego njem, ọ bụ ukwuu kwesiri na ị ga-nnọọ mmasị anọ na a mbikọ. Ọnụahịa nwere ike ịmalite dị ka obere cents ole na ole $100 maka akọrọ ụlọ, dabere na nke akụkụ nke ụwa na ị na, ma, ọ bụ nnọọ obere maka ahịa na-aga elu karịa. Ọbụna mbikọ na anya nke ihe Alps na-aga maka gburugburu $64 kwa abalị.
The ikpeazụ ozi anyị chọrọ inye gị bụ, The ụzọ kasị mma na-esi na gị mbikọ bụ ụgbọ okporo ígwè eme njem na Save A Train na ihe mere na bụ na ụgbọ oloko mgbe niile na-abata na obi nke obodo ma ọ bụ ebe ụlọ mbikọ ụlọ na-, enwe gị njem na ụgbọ okporo ígwè njem.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fenjoying-a-guilt-free-trip-hostel-accommodation%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / na / pl ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
#mbikọ #gọọmenti rụrụ traveltips
Karina Santos - is a mom of a 2-year-old boy, and a wife. Her day is filled with diapers and emails. N'ihi nke a, she has discovered a whole new level of multi-tasking. Her weekdays mostly revolve around work, and family. She loves spending her weekends with her baby and going on date nights with her husband. - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m